-Dhacdo China FK812 Automatic Card / Bac / kartoon Summada Warshada Machine iyo alaab-qeybiyeyaasha |Fineco
Semi-Auto calaamadeynta mashiinka
① FK812 Calaamadeynta otomaatigga ah ee alaabta kaadhka, si toos ah u geyn alaabta suunka qaada iyo calaamadaynta, mari kaarka, bacda, kartoonka, warqadaha iyo kuwa kale ee alaabta jarjaran, sida caag khafiif ah iyo calaamad khafiif ah.
② FK812 waxay gaari kartaa summeynta daboolka buuxa, calaamadeynta qayb ahaan sax ah, calaamadinta calaamado badan oo toosan iyo calaamado calaamado badan oo toosan, oo si ballaaran loogu isticmaalo kartoonnada, caagagga, elektiroonigga, kaararka iyo warshadaha agabka daabacaadda.
FK812 Kaadhka otomaatiga ah/bac/kaartoon calaamadaynta mashiinka
Waxaad ku dhejin kartaa fiidiyaha muuqaalka geeska midig ee hoose ee fiidiyowga
Tilmaamaha Summada dhejisyo dhejis ah, hufan ama madmadow
Dulqaadashada calaamadinta ±0.5mm
Awoodda (kumbuyuutar / daqiqo) 40 ~ 120
Cabbirka dhalada suuit (mm) L: 40 ~ 400 W: 20 ~ 200 H: 0.2 ~ 150; waa la beddeli karaa
Cabbirka summada suudhka (mm) L:15-100;W(H):15-130
Cabbirka Mashiinka (L*W*H) ≈2080*695*1390(mm)
Cabbirka Xidhmada (L*W*H) ≈2130*730*1450(mm)
Voltage 220V/50(60)HZ;waa la beddeli karaa
Wareegtada sumadda Aqoonsiga:Ø76mm;OD: ≤260mm
Maya Qaab dhismeedka Shaqada
1 Gaadhida Gudbi alaabta
2 Calaamadaynta Madaxa Xudunta calaamadeeyaha, oo ay ku jiraan summada dabaylaha iyo qaab dhismeedka wadista
3 Shaashada taabashada Halbeegyada hawlgalka iyo dejinta
4 Saxanka Ururinta Ururi alaabta la calaamadiyey
5 Xoojinta Roller Isbuunyada Riix badeecada calaamadsan si aad u xoojiso calaamadaynta
6 Furaha ugu weyn Fur mashiinka
7 Joojinta Degdegga ah Jooji mishiinka haddii uu si khaldan u socdo
8 Sanduuqa Korontada Dhig qaabaynta elektarooniga ah
9 Qalabka Pagination Kala saar boorsooyinka/kaadhadhka/...oo mid mid u sii qaadaha.
Shuruudaha Wax Soo Saarka Summada
1. Farqiga u dhexeeya calaamadda iyo calaamaddu waa 2-3mm;
2. Masaafada u dhaxaysa calaamadda iyo cidhifka warqadda hoose waa 2mm;
3. Warqadda hoose ee calaamaddu waxay ka samaysan tahay muraayad, kaas oo leh adayg wanaagsan oo ka hortagaya inuu jebiyo (si looga fogaado in la gooyo warqadda hoose);
4. Dhexroorka gudaha ee xudunta waa 76mm, dhexroorka dibaduna waa in ka yar 300mm, oo loo habeeyey hal saf.
Soo saarista summada sare waxay u baahan tahay in lagu daro alaabtaada.Shuruudaha gaarka ah, fadlan tixraac natiijooyinka xiriirka injineeradayada!
1) Nidaamka Xakamaynta: Nidaamka xakamaynta Panasonic ee Japan, oo leh xasilooni sare iyo heer aad u hooseeya.
2) Nidaamka hawlgalka: Shaashadda taabashada midabka, si toos ah muuqaal muuqaal ah hawl fudud. Shiinees iyo Ingiriis ayaa la heli karaa.Si fudud loo habeeyo dhammaan cabbirrada korantada oo ay leeyihiin shaqada tirinta, taas oo waxtar u leh maareynta wax soo saarka.
3) Nidaamka ogaanshaha: Isticmaalka German LEUZE/Talyaaniga Datalogic calaamadda dareenka iyo Japanese Panasonic dareemaha wax soo saarka, kuwaas oo xasaasi u ah calaamadaynta iyo alaabta, si loo hubiyo in saxnaanta sare iyo waxqabadka calaamadaynta xasilloon.Waxay si weyn u badbaadisaa foosha.
4) Shaqada qaylo dhaanta: Mashiinku wuxuu ku siin doonaa qaylo-dhaan marka ay dhibaatadu dhacdo, sida summada ku daatay, calaamad jabtay, ama cillado kale.
5) Qalabka Mashiinka: Mashiinka iyo qaybaha kale ee dhammaan waxay isticmaalaan walxaha birta ah iyo aluminium aluminium sare oo anodized ah, oo leh iska caabbinta daxalka sare oo aan waligood miridhku noqon.
6) Ku qalabee transformerer danab si uu ula qabsado danab gudaha ah.
2) Naqshadeeyuhu wuxuu raaci doonaa waaxda farsamaynta si loo hubiyo in qayb kasta oo makaanikada ah si sax ah iyo waqtigeeda loogu shaqeeyo.
3) Kadib dhammaan qaybaha la sameeyay, mas'uuliyadda naqshadeeyaha ku wareejinaya Waaxda Golaha, oo u baahan inay ku ururiyaan qalabka waqtigii loogu talagalay.
5) Ka dib markii macmiilka ee hubinta video hubinta / kormeerka warshad, iibinta diyaarin doonaa gaarsiinta.
6) Haddii macmiilku dhibaato kala kulmo codsiga, iibku wuxuu weydiin doonaa Waaxda iibka kadib inay si wadajir ah u xalliyaan.
Hore: FK811 Mishiinka Calaamadaynta Diyaarada Tooska ah
Xiga: FK814 Si Toos ah u Sarreeya & Mishiinka Sumadaynta Hoose
mashiinka calaamadaynta bac toos ah
Mashiinka calaamadaynta kaadhka tooska ah
mashiinka calaamadaynta kartoonnada si toos ah
Mashiinka Calaamadaynta Tooska ah ee Kaararka
Mashiinka calaamadaynta boorsada
Mashiinka calaamadaynta kaadhka
mashiinka calaamadaynta kartoon
Mashiinka calaamadaynta kartoonada
mashiinka calaamadaynta boorsada quudinta
mashiinka calaamadaynta kaadhka quudinta
mashiinka calaamadaynta kartoonnada quudinta
Mashiinka calaamadaynta kaadhka dusha sare ee fidsan
mashiinka calaamadaynta sanduuqa laab laab
Mashiinka calaamadaynta waraaqaha
Mashiinka calaamadaynta boorsada caaga ah
Mashiinka calaamadaynta kaadhka boostada
Mashiinka calaamadaynta kaadhka xoqida
Mashiinka calaamadaynta kaadhka kala saarida
mashiinka calaamadaynta bacaha hufan
FK838 Soo saarista Diyaarad Toos ah
FKP835 Buuxa oo Toos ah oo Buuxa oo Daabacaadda-Waqtiga Dhabta ah
FK617 Semi otomaatig ah ee Diyaaradda Rolling Sumaynta Mac...
FK835 Si Toos ah Wax Soo Saarka Diyaaradda
FK618 Semi Toos ah oo Summada Diyaarada Saxda ah ee Sare...
FKP-801 Mashiinka Calaamadaynta Summada Daabacaadda Waqtiga-dhabta ah